Zana-tsipìka CSS 23 tonga lafatra hamelona sy "handravaka" ny tranonkalanao | Famoronana an-tserasera
Zana-tsipika mihetsika 23 ao amin'ny CSS ho an'ny tranonkalanao
Manuel Ramirez | | CSS, Famolavolana tranonkala
Ireo dia Zana-tsipìka CSS mihetsika 23 izay mety indrindra amin'ireo singa izay mitarika ny mason'ny mpampiasa izay mikasa ny handalo alohan'ny ekipa tetikasa X misy lohahevitra, na amin'ny toerana ahafahana mividy amin'ny eCommerce; zana-tsipìka izay tena ilaina mba hahafahana mamorona funnels ary hahatratra ny fiovam-po bebe kokoa an'io vokatra amidinay ao amin'ny eCommerce anay io.
1 Zana-tsipìka CSS sarimiaina
2 Zana-tsipika mihetsika
3 Sarimiaina zana-tsipìka
4 Sarimiaina zana-tsipìka
5 Rohy zana-tsipika
6 Sarimiaina zana-tsipìka telo
7 Zana-tsipìka CSS tsotra niverina teo an-tampony
8 Zana-tsipika elastika
9 Arrow SVG miaraka amina sary mihetsika
10 Tifitra CSS Chevron
11 Arrow svg
13 Zana-tsipìka CSS madio
14 Zana-tsipika CSS miolaka
16 Zana-tsipìka telo amin'ny iray
17 Sarimiaina horonan-taratasy CSS madio
18 Sarimiaina zana-tsipìka SCSS
19 Sarimiaina zana-tsipika gooey
20 Sarimiaina hatramin'ny farany
21 Zoro tsipika tsotra
22 Fihetsiketsehana amin'ny zana-tsipìka
23 Sarimiaina zana-tsipìka
Zana-tsipìka CSS sarimiaina
zana-tsipìka CSS Animated miaraka amina horonana izay santionany voalohany amin'ny zana-tsipìka CSS mihetsika amin'ity andiany 23 ity. Vokany tsotra ho an'ny zana-tsipika misy valiny hita maso ary tsy mihoatra ny voalaza.
Una arrow in svg izay hahatratra sary mihetsika sahaza sy tsara rehefa manana ny pointer totozy momba azy io. Amin'ny hetsika boribory dia hasongadinay ity singa tranonkala manan-danja ity amin'ny tranokala maro.
Sarimiaina amin'ny CSS sy HTML izay misy a fanovana tsipika tsotra maoderina kokoa mankany amin'ny kilasika kokoa. Tsy misy afa-tsy ity sarimiaina ity ho an'ny zana-tsipìka miaraka amana famaranana tsara sy tsotra.
Andiana zana-tsipìka mihetsika ao anaty toerana sy fihetsehana samihafa. Ny hetsika dia aorinan'ny zana-tsipìka izay misy "hover" izay manasongadina ny toerana alain'ny zana-tsipìka eo amin'ny tranonkala.
ny mamily faribolana rehefa avelantsika eo ambonin'ity kisary ity ny mpanondro totozy. Fampisehoana an-tsehatra voafehy tsara tantana, saingy misy fiatraikany lehibe toy ny ambiny izay zarainay amin'ity lahatsoratra ity ao amin'ny Creativos Online.
Sarimiaina zana-tsipìka telo
Miorina amin'ny sary SVG, Eto ianao dia manana andian-tranonkala natokana ho an'ity karazana endrika sary ity, a sary mihetsika telo izay mitarika amin'ny telo zana-tsipìka voalohany tao anaty iray monja. Fiovana lehibe iray hafa ho an'ny tranonkalanao izay manome azy fifandraisana matihanina.
Zana-tsipìka CSS tsotra niverina teo an-tampony
Ity iray ity zana-tsipika tsotra amin'ny CSS manana ny andraikitra hiverina amin'ny fiandohan'ny tranonkala. Fiovana mihomehy miaraka amin'ny hafainganam-pandeha sy ny hafainganam-pandeha izay mamorona sary mihetsika tsotra sy tsotra raha vao jerena, na dia manome fikitihana matihanina toa ilay teo aloha aza izy io.
Arrow SVG miaraka amina sary mihetsika
Zana-tsipika SVG izay miandry anao avelao hidina ny tondro Ho fisehoan'ny famindrana toerana ary hiova ho mena ny lokony, farafaharatsiny izay voalaza ao amin'ny ohatra, dia ho lasa fomba ampanjifaina azy io araka ny itiavantsika azy sy ny toetrantsika taloha.
Tifitra CSS Chevron
Zana-tsipìka CSS somary tsotra amin'ny miondrika ny tenany miaraka amin'ny fiovan'ny loko. ny amin'ireo zana-tsipìka tena fototra, fa satria tsy misy ny tsy fahampian'ny kalitao ary izany no antenaina hikasika ny maro hafa.
Vokatry ny tetezamita amin'ny lanja na «lanja» an'ny sary masina, amin'ity tranga ity dia zana-tsipìka ho mpiorina an'ity fidirana ity. Mampitombo ny lanjan'ireo zana-tsipìka fotsiny ianao miaraka amin'ny vokatra miorina amin'ny CSS.
Un fanandramana zana-tsipika ahitantsika karazana isan-karazany tsara amin'izy ireo miaraka amin'ny mampiavaka azy ireo nohariana tamin'ny singa div sy pseudo.
Zana-tsipìka CSS madio
iray hafa karazana zana-tsipìka manankarena ny lisitra, na dia eto aza isika dia afaka miavaka ankoatry ny famoronana amin'ny CSS sy HTML.
Zana-tsipika CSS miolaka
Raha te hanome ianao vokany miolakolaka toa voasintona eny an-tanana, ity zana-tsipìka amin'ny CSS ity dia mety indrindra amin'izany.
Zana-tsipìka miaraka amin'ny tetezamita CSS hahatratra ny vokatry ny zana-tsipìka amin'ny sary maromaro izay manintona ilay tarehimarika resahina.
Zana-tsipìka telo amin'ny iray
Sarimiaina marefo amin'ny mitantana manova zana-tsipìka telo ho iray. Ny iray amin'ireo vokany izay azontsika tadiavina ary ananantsika ny kaody ka ampiasaintsika araka izay itiavantsika azy amin'ny asantsika na tranokalanay.
Sarimiaina horonan-taratasy CSS madio
Sarimiaina ao maody tsy manam-petra an'ny andiana zana-tsipìka mamela ny iray hafa handroso hiakatra afovoany rehefa izy ireo no lehibe indrindra. Miaraka amin'ny famaranana tsara dia lasa zana-tsipìka mety izy hampirisihana hanaraka ny lalana amin'ny tranonkala.
Sarimiaina zana-tsipìka SCSS
iray hafa sary mihetsika tsotra tsy manam-petra ary izay miavaka amin'ny fanjavona mba hanome lalana ny zana-tsipìka hafa ary amin'izany dia hahatratra "loop" manokana.
Sarimiaina zana-tsipika gooey
Amin'ireo sary mihetsika hita ato amin'ity lisitra zana-tsipika ity dia tsy isalasalana fa ny liana sy mamorona indrindra. Sarimiaina izay saika mandalo ny sehatry ny fihodinany. Nanoro hevitra anao tokoa ny hamela ny mpampiasa ho gaga izay tonga ao amin'ny tranonkalanao.
Sarimiaina hatramin'ny farany
Ity sarimiaina ity, toy ireo taloha, dia manana ho an'ny mpampiasa any amin'ny faran'ny tranokala ka lasa amin'ny footer. Mampiavaka azy ny sary mihetsika mamorona izay mampiavaka azy amin'ny ambiny. Aleo ianao mahita azy amin'ny hetsika manomboka amin'ny rohy mankany amin'ny codepen.io.
Zoro tsipika tsotra
Sary famantarana izay araka ny voalaza dia tena tsotra ary izay Izy io dia misy sary mihetsika tsotra. Tsy midika izany fa miatrika kaody tsara kalitao toa ilay nozarain'i Joshua MacDonald izahay.
Fihetsiketsehana amin'ny zana-tsipìka
Zana-tsipìka hafa miaraka a fampivoarana sary mihetsika amin'ny HTML sy CSS izay manandrana tsy hitovy amin'ny hafa. Azo antoka fa azonao avy amin'ny demo izany ary alainao ilay rohy.
Sarimiaina iray hafa ho an'ny zana-tsipìka amin'ny CSS sy HTML izay tsara «nihetsika». Io no fananany lehibe indrindra amin'ny fanavahana azy amin'ny sisa amin'ity andiana zana-tsipika CSS 23 ity ho an'ny tranonkalanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Zana-tsipika mihetsika 23 ao amin'ny CSS ho an'ny tranonkalanao
Salama! Misaotra betsaka amin'ny vaovao. Manana fanontaniana momba ny zana-tsipìka miolaka aho… misy fomba hanovana ny fihodinan'ny fiolahana ve? afaka asehonao kaody ve aho? Tiako izany!
Plugins Jquery 33 ho an'ny galeriana azonao ampiharina amin'ny tranokalanao izao